Dhaxalka Buugga Haaneed. Qaybta 2aad
Thursday October 10, 2019 - 09:47:42 in Articles by Hadhwanaag News
Gabayga aad ka akhrisato buuggani waxa uu kuu gudbin doonaa maanso,
maansaduna geeraar, geeraarkuna hees hawleedyo iyo halo kaloo badan oon halkan lagu soo koobi karin!
Waxa uu buuggu ka warramayaa "Dulmidiidka” iyo daryeel la’aanta bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxa uu cidkasta kala hadlyaa hawsha u taala iyo ta u imanaysaba. Ummadda oo dhan ayuu si gaara iyo guudba ula hadlayaa. Waxa uu cidkasta u tilmaamayaa masuuliyadda hortaala iyo waxa la gudboon.
"Hasha laba nin baa lisa. Ninka dhiilka haya ayaa haaneedka taagan. Waa dhinaca mudan ee hasha laga joogsado. Timacadde waa kii lahaa, ‘Haaneednay Maandeeq Ilaah nama hungeysiine’. Halbay kalmaddaasi markii hore ku saabsanayd, markii danbena hal’abuurku gobannimadii bay u adeegsadeen. Gabayga laftiisuna wuxu kala leeyahay ‘Haaneed’ iyo ‘Miskeed’, oo waa in la haaneedo oo dhinaca tooska ah la iska taago. Ibraahin-Gadhle ayaa waxa uu yidhi: ‘Maansada abwaanoow, haaneedka mooyee, yaan miskeedka laga gelin!. Markaa magaca ‘Haaneed’ ee buuggani waxa uu u taagan yahay in suugaanta xagga toosan ee bulshada wax u taraysa laga galo oo la iska taago”. Axmed Iid Aadan
Maansooyinka dhiganahan ku diiwaan-gashan waxaad ka dheehanaysaa aqoon aad u baaxad wayn, isla markaana ka miisaan wayn inta aad ka baratay. Buugga waxaad ugu tegi doontaa maansooyin duluc keli ah koobsanaya sida; "Shahiid dirir”, "guur”, "abaydin abaydin dhalay”, "indha daalis”, "dadku waa ilmo aadan”, "geyaan” ,"waa carruur”, "yaan iblays fooqyo kaa ridin” iyo qaar kaloo badan. Maansooyin arar kooban sida; cirjiidh, dhiigmaydh iyo roob doon. Maansooyin dulucdoodu ka mugwaytahay oo ay badan tahay isla markaana ujeedooyin badan midaynaya sida; Himilo iyo jiiftada garbadiir. Maansooyin dulucdoodu dedan tahay sida kordahab iyo hiddasan.
"Maansada Kordahab waa dugsi cusub oo Ibofur u noqon kara in gabayga Soomalidu uu hannaan kii hore ka duwan u cabbiro caashaqa” Kamaal Axmed Cali.
Illayn waa gumaro270dihin
Suuraaf271baa kuu duddee
Dabbaal272 iyo maaha nacas
Absuga279waa looga digay
Daas282iyo lacag iyo qadhiidh283
Dirhamka soof284lagu gatiyo
Amaba demesh285iyo xariir